‘लकडाउनले काठमाडौंका १५ सय रेस्टुरेन्ट बन्द हुन्छन्’
सुशील भट्टराई काठमाडाैं - मंगलबार, असार १६, २०७७
झन्डै पाँच दशकदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका श्यामसुन्दरलाल कक्षपती स्थापित चेन रेस्टुरेन्ट ब्रान्ड ‘नाङ्लो’ का सञ्चालक हुन्। नाङ्लो ग्रुप अफ कम्पनिजका संस्थापक अध्यक्ष कक्षपतीलाई नेपालमा सम्भवतः ‘रेस्टुरेन्ट कल्चर’ र ‘कफी कल्चर’ सुरुवात गर्ने श्रेय दिँदा दुईमत हुँदैन। पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका हरेक देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ।
कोरोना कहरको चपेटामा नेपाल अछुतो रहन सक्ने सम्भावना रहेन। यसबाट मानवीय क्षतिमात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिसकेको छ। सर्वसाधारण हुँदै मध्यमदेखि घरानियाँसम्म जाने रेस्टुरेन्ट व्यवसाय कोरोनाका कारण ठूलो संकटमा परेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनअघि सञ्चालनमा रहेका ३ हजार रेस्टुरेन्ट कोरोनाकै कारण आधा बन्द हुने कक्षपतीको अनुमान छ।
रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको छाता संगठन ‘रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल’ (रेबान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कक्षपती रेस्टुरेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष कार्यरत ७५ हजार मजदुर कोरोनाकै कारण बेरोजगार बन्ने अवस्था आएको बताउँछन्। यिनै सेरेफेरोमा रहेर कक्षपतीसँग आयोमेलका लागि सुशील भट्टराईले गरेको भिडियो अन्तर्वार्ता :
कोरोना भाइरस महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको छ। यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। यस सन्दर्भमा कोरोना अघि र त्यसपछिको नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा के–कस्तो प्रभाव परेको छ?
कोरोना भाइरस आउनुअघि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय ठूलो परिमाणले विस्तार भएको थियो। लगानी त्यसैगरी बढेको थियो। अचम्मैसँग विकास भएको थियो। तर, दुई वर्षयता यसको विस्तारमा केही गिरावट आएको थियो। चलेका रेस्टुरेन्टमा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको विकास हुन्छ। यो व्यवसायमा विकास र विस्तार भएन भने दिगो हुँदैन। प्रत्येक वर्ष लागत बढ्दै जान्छ। घरभाडा बढ्दै जान्छ। आफ्नै घरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने असाध्यै कममात्र हुने गर्छ। ९९ प्रतिशत रेस्टुरेन्ट भाडाका घरमा चलेका छन्। दुई वर्षयता रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा घट्दै गयो। किनभने खाने मान्छे घटेर होइन, मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर हो। यसको अर्थ हामीलाई चाहिनेभन्दा रेस्टुरेन्ट संख्या बढी भएर हो। काठमाडौंमै हेर्नुभयो भने घरैपिच्छे रेस्टुरेन्ट छन्। एक वर्षयता रेस्टुरेन्ट त्यही भए पनि सञ्चालक परिवर्तन भएको भयै छन्।
काठमाडौंबाहेक अन्य सहरमा पनि यही समस्या थियो। यस्तो परिस्थितिमा फ्याट्ट कोरोना भाइरसको महामारी आएर झन् गम्भीर असर पुग्यो। यसले सबै रेस्टुरेन्ट बन्द भयो। मुख्य समस्या भनेको घरभाडाको समस्या हो। त्यसपछि कर्मचारीको समस्या र बैंक ऋणको समस्या हो। रेस्टुरेन्ट भनेको यस्तो संवेदनशील हुन्छ कि यो लामो समय बन्द हुनैपर्दैन, छोटो समयमै धराशायी हुन्छ। अब यो कोरोना भाइरस कति समय जान्छ भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। हामीकहाँ प्रमुख चार वर्गका रेस्टुरेन्ट छन्। विदेशी पर्यटकमात्र ग्राहक हुने, सबै जान नसक्ने तर सीमित वर्गका जाने रेस्टुरेन्ट–बार–क्लब, मध्यमवर्गका नेपाली जाने र अर्को फास्टफुड रेस्टुरेन्ट हुन्। यसबाहेक, अनौपचारिक क्षेत्रबाट चलेका रेस्टुरेन्ट, जहाँ भ्याट वा सेवा शुल्क लिइँदैन र जसलाई विशुद्ध परिवारले चलाएको हुन्छ। त्यो ठूलो क्षेत्र हो।
कोरोना भाइरस गइहाले पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पुनः लयमा फर्किन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अनुमानमा ५० प्रतिशतसम्म रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छन्। पर्यटकलक्षित रेस्टुरेन्ट पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन छ। अर्को एक वर्षसम्म नेपालमा पर्यटक आउन मुस्किल छ। त्यसकारण त्यस्ता रेस्टुरेन्ट पुनः सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। किनभने ठमेलजस्तो महँगो घरभाडा हुने ठाउँमा छन्। त्यस्ता रेस्टुरेन्ट ५० देखि ७५ प्रतिशत बन्द हुने सम्भावना छ। त्यस्तै दोस्रो वर्गको रेस्टुरेन्ट पनि त्यही समस्यामा हुनेछन्। तिनले एक वर्षसम्म बिनाआम्दानी घरभाडा, कर्मचारी खर्च धान्न गाह्रो छ। नेपालमा अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका बेला मान्छेको आम्दानी हुँदैन र त्यसो हुनासाथ मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा गएर खान कम गर्छन्।
त्यसबाहेक कोरोनापछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने मापदण्ड जारी रहनेछ। यसबाट अर्को समस्या थपिने छ। जस्तै, कुनै रेस्टुरेन्ट सय सिट क्षमताको छ भने अब खुलेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दा ३० देखि ३५ जनामात्र बस्न मिल्छ। अनि यसरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बचाउन असाध्यै गाह्रो छ। त्यसबाहेक स्वास्थ्यका कुरा आउँछ, ग्राहक सेवा, खानेकुरा पस्कने कुरा, यावत विषय आउँछन्। यसबाट रेस्टुरेन्टको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा हामी अर्को एक वर्षजति कसरी बाँच्ने भन्ने हो। रोजगारी कसरी जोगाउने भन्ने हो। यसमा लगानीको कुरा आउँछ। रेस्टुरेन्टको लगानी भनेको अर्काको ठाउँमा करोडौं खर्च गर्ने हो।
हरेक रेस्टुरेन्टले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्, बैंकको ऋण र ब्याज पनि तिरिरहेका छन्। तर, यस्तो बेला सरकारले हामीलाई बचाउने वा उद्धार गर्ने केही प्याकेज ल्याएको छैन। सरकारले हामीलाई कम ब्याजदरमा ‘वर्किङ क्यापिटल’ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक हाम्रा कामदारलाई पनि सररकाले उद्धार गर्नुपर्र्छ। एक दशकयता आयकर भनेर एक प्रतिशत सरकारलाई बुझाइरहेका छन्। त्यो कोषमा अर्बौं जम्मा भएको छ। त्यसबाहेक गत वर्ष साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिकामदारका लागि २० र उनीहरूको तलबबाट ११ गरी ३१ प्रतिशत जम्मा गर्दै आएका छौं। त्यो कोषमा पनि ठूलो परिमाणबराबरको रकम जम्मा भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको यस्तै बेला चाहिने हो नि। जब समस्या पर्छ तब यस्तो कोष उपयोग गर्नुपर्छ। यसबारे सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
हाम्रो श्रम ऐनलाई पनि अब उदार बनाउने बेला आइसक्यो। कोरोना महामारीपछि कुनै रेस्टुरेन्टले नियमसंगत हिसाबले कर्मचारी कटौती गरेर पुनः सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने हो भने सरकारले श्रम ऐन चारदेखि पाँच वर्ष उदार बनाइदिनुपर्छ। त्यसबाहेक अर्थतन्त्र माथि ल्याउन अब आठ घन्टा काम गरेर पुग्दैन कम्तीमा १२ घन्टा काम गर्नुपर्छ। आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन अनि आठ घन्टा आराम भन्ने सिद्धान्तले अर्ब अर्थतन्त्र उकालो लाग्नेवाला छैन। यसका लागि प्रमुख समस्या भनेको हाम्रो श्रम ऐन हो। श्रम ऐनलाई उदार बनायो भने हामी र कामदारबीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन्छ। तर, सरकारचाहिँ व्यवसायी र कामदारलाई झगडा गराएर रमिता हेरेर बस्छ।
मानौं, मेरो रेस्टुरेन्टमा ६ सयजना काम गर्छन् भने अब ३ सयमा झार्नुपर्ने हुन्छ। हो, यस्तो बेला कर्मचारी कटौती गर्न मन मान्दैन तर बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु विस्तारै दुई–तीन वर्षमा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो भने ती कामदारलाई नै लिने छौं। हामीले तिरिरहेको ब्याज र किस्ता अर्को एक वर्ष धकेल्न पायो भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई राहत पुग्ने छ। यति हुन सकेन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट बन्द हुन्छन्। यसको क्षति हामीमात्र होइन, सरकारदेखि बैंकसम्म सबैलाई पुग्छ। सबैभन्दा ठूलो त कामदारले रोजीरोटी गुमाउनुपर्छ। बेरोजगारी समस्या चरम हुने निश्चित छ। त्यसकारण भएका उद्योग–व्यवसायलाई कसरी बचाउने भन्नेबारे सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालको रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा कति लगानी भएको छ? र, अब यो कतातिर जाला?
रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठ्याक्कै यति लगानी भयो भन्ने तथ्यांक पाउन मुस्किल छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी कूल ३ हजारजति रेस्टुरेन्ट छन्। तिनमा ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। त्यसबाहेक तरकारी, अन्डा, मासुर, दुग्ध पदार्थ उत्पादक पनि त्यसैगरी गम्भीर प्रभावमा परिसकेका छन्। रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दा पर्यटकको मात्र कुरा आउँदैन। मध्यमवर्ग पनि त्यसैगरी जोडिएर आउँछन्।
७५ हजारले रोजगारी पाइरहेको बेला अब आधा रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने देखियो। यसमा मजदुर युनियनसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?
लकडाउन सुरु भएसम्मको पूरै तलब कर्मचारीलाई दिइसकेका छौं। समस्या सबैलाई परेको हो भनेर गत चैतको पूरै तलब दियौं । वैशाख महिनादेखि हामी पूरै तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। मजदुर युनियनहरू पूरै तलब चाहिन्छ भन्ने अडानमा छन्। हामी यसमा सहमत छैनौं। अब यो विषयमा हाम्रो अडान भनेको आगामी ६ महिना कामदारलाई साढे १२ प्रतिशत हामी दिने, त्यसमा अर्को साढे १२ प्रतिशत सरकारले दिने र अर्को साढे १२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिनुपर्छ भन्ने हो। यसो भयो भने कामदारलाई यस्तो महामारीमा बाँच्न सहज हुन्छ। ५–६ महिना यसरी दिने योजना हाम्रो छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले पनि कामदारलाई दिन बाँकी सेवा शुल्क यही बेला दिने योजना छ।
हामीले सर्भिस चार्ज होल्ड गरेका हुन्छौं। यो महिनामा ६ महिनाअगाडिको सर्भिस चार्ज दिन्छौं। श्रमिकको ५ महिनाको पैसा हामीसँग छ। होटल सेक्टरमा थोरै तलब ८–९ हजार हुन्छ। धेरैमा २०–२५ हजारसम्म हुन्छ। त्यतिले सस्टेन गर्न सक्छ। थप ५० प्रतिशत सर्भिस चार्जबाट आउने भयो। त्यसकारण ५–६ महिना श्रमिकले धान्न सक्छन्। हामीले होल्ड गरिएको सर्भिस चार्ज दिन्छौं भनेका छौं। कतिपय रेस्टुरेन्टको सर्भिस चार्ज थोरै हुन्छ, उनीहरूले तलब खुवाउन सक्दैनौं भनेका छन्। श्रमिकले शतप्रतिशत चाहिन्छ भनेका छन्। यो कन्फ्लिक्ट हुने भएकाले श्रम ऐनमा उदारीकरण गर्नुपर्छ भनेको हो।
विश्वव्यापी प्रकोपका बेला द्वन्द्व भयो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ। आफ्ना कामदारसँग हामी डिल गर्न सक्छौं। तर, यहाँ समस्या आउने भनेको नै युनियनबाटै हो। तथाकथित ट्रेड युनियनहरू छन्, कामदारसँग करोडौं लेबी उठाउँछन्। तर, अहिले के गरेका छन्? ट्रेड युनियनबाट प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा पुग्नुभएको हो विष्णु रिमालजी। उहाँले के गरिराख्नुभएको छ? उहाँको काम नै झण्डा बोकाउने र हिँडाउने मात्रै छ। यस्तो क्राइसिसमा एउटा प्याकेजको काम गरेको छैन, बोेलेको छैन। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। सरकारले कुनै आँट गरेर बोल्न सकेको छैन।
बेलायतमा ८० प्रतिशत सरकारले राख्छ, २० प्रतिशत व्यवसायीले राख, तलब रोक्न पाइँदैन भनेर कार्यान्वयन गरिएको छ। त्यस्तै प्याकेजको कुरा आए हामी पनि गर्छौं नि। काम गर्नेलाई पैसा दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले भन्सारमा पैसा उठेको छैन, कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भनेका छन्। सरकारको त्यो हालत छ भने हाम्रो के हालत होला? तीन महिनादेखि एक पैसा आम्दानी भएको छैन। सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्यायो भने हामी बाँच्न सक्छौं। नभए बाँच्न सकिँदैन।
रेस्टुरेन्टको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको घरभाडा हो। घरबेटीलाई हामी बहाल दिन्नांै भन्न सक्दैनौं। घरबेटी पनि त्यही बहालमै आश्रित हुन्। परिवार चलाउन त्यही बहालमा भरपर्नुपर्ने हुन्छ। कामदारलाई पनि हामी पैसा दिदैनौं भन्न सक्दैनौं। उनीहरूले पनि आफ्नो पेट पाल्नुपर्ने हुन्छ। रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा अहिले मुख्य तीनवटा समस्या छन्। अहिले सरकारले बहाल तिर्नका लागि थोरै ब्याजमा वर्किङ क्यापिटल दियो भने बहाल तिर्न सकिन्छ। अहिले हामीसँग पैसा छैन। काम नभएका बेला कामदारलाई पैसा दिन गाह्रो हुन्छ। सञ्चालक, श्रमिक र युनियन मिलेर एउटा प्याकेज बनाएर रोजीरोटी चलाउने अवस्था बनाउनुपर्छ।
बैंकको ब्याज र किस्ता एक वर्षपछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्ने र एक वर्षपछि त्यहीँबाट किस्ता सुरु हुन्छ। एक वर्ष हामीले समय पायौं भने ठूलो राहत मिल्ने छ। भोलि रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बन्द गर्न दिनुपर्छ। धेरै होटल बन्द हुने अवस्थामा छन्। ठमेलमा ९० प्रतिशत होटल रेन्ट (भाडा) मा चलेका छन्। एउटै पर्यटक छैनन्, उनीहरूले रेन्ट तिरिराख्न सक्छन्? बन्द गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई त्यो अवसर दिनुपर्छ। सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
यस्तो महामारीमा पनि सरकारले होटल, रेस्टुरेन्टसहित पर्यटन क्षेत्रलाई किन सम्बोधन गरिरहेको छैन?
यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री सरकार होइन। आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पनि योगदान गरेको छ भन्ने लाग्थ्यो भने सरकारले अस्ति नै सानोतिनो प्याकेज घोषणा गर्ने थियो। यहीं बाटोमा मान्छेले खान पाएका छैनन्। तीन महिनापछि प्याकेज ल्याउँछु अनि खाउँला भनेर हुँदैन। मेरो स्टाफले फोन गरेर ‘यसपालि तलब आउँछ कि आउँदैन’ भनेर सोध्छन्। उनीहरूलाई पनि बाँच्नु छ नि। मैले एक दिनमा हामी केही न केही गर्छौं भनेँ। सर्भिस चार्ज लिन्छु, अरू चाहिँ के कति हुन्छ गर्छु भनेको छु। कतिसम्म भने, पहिले कमाएको निकालेर तिर्नुपर्छ भनेको पनि सुनेको छु। के सरकारले पहिले कमाएको थिएन? हामीले सरकारलाई तिरेको छैन? व्यवसाय गर्नेसँग लिक्विड क्यास (नगद) हुँदैन। लिक्विड क्यास राख्ने व्यवसायी होइनन्। पुनर्लगानी गर्दै जाने हो। यसपालि मैले झन्डै ५ देखि ६ करोड लगानी गरेँ। भिजिट नेपाल २०२० का कारण कोठा बढाएँ। सामानहरू फेरेँ। अहिले सबै जिरो भयो। पैसा आउँछ भनेको बेला सिजन सुरु भएपछि महामारी सुरु भयो। व्यवसाय नबुझेका मान्छेले तिमीहरूले कमाएका छौ, त्यही निकालेर तिर भन्ने गर्छन्। कुनै पनि बिजनेसम्यानले लिक्विड क्यास थन्क्याएर राखेको हुँदैन। हामी लगानी गर्दै जान्छौं। उत्पादकत्व बढाउँदै जाने हो। गुणस्तर बढाउँदै जाने हो। लिक्विड क्यास भएको भए किन बैंकमा गएर पैसा लिएर आउछौं? आफ्नै पैसा चलाउँछौं। सरकारले सोच्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। विदेशको बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्न पाउँदैनौं। सरकारले रेस्क्यु (उद्धार) नगरे कसले गर्छ?
कोरोना महामारीपछि होटल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको मुख्य चुनौती के हो?
अब कम्तीमा ६ महिना होटल बन्द हुन्छन्। त्यसपछि रिभाइभ (पुनर्जीवित) हुनलाई पनि सन् २०२१ को अन्त्यभन्दा अगाडि होटल क्षेत्र रिभाइभ हुनेवाला छैन। त्यसकारण त्यतिबेलासम्म कसरी जाने भन्ने विषय नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। युरोप, अमेरिकातिर होटल खुल्न थालेका छन्। तर, त्यहाँको ट्रेन्ड हेर्दा नेपालमा गर्न धेरै गाह्रो छ। विश्व पर्यटन संगठनले पनि गेस्टले चेकआउट गरेपछि ४८ घन्टासम्म अर्को गेस्ट राख्न नपाइने भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टे«न्ड पनि २४ देखि ४८ घन्टासम्मको छ। अर्का डेढ वर्षसम्म चाहिँ होटललाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कतिले तीनवटा समूह बनाउने, जुन–जुनले काम गर्छन्, उनीहरूलाई त्यति–त्यति दिनको पैसा दिने कुरा पनि आएको छ।
पहिलो कुरा, सर्भाइबल हो। अनि कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरा हो। र, बाहिरका पर्यटकलाई नेपालमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने हो। कतिले आन्तरिक पर्यटनबाट हुन्छ भन्छन्, त्यो सम्भव छैन। अहिले आन्तरिक पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। त्यसैले बाहिरका पर्यटकलाई नेपाल आउन सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ। त्यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन सक्नुपर्छ। नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र मिलेर त्यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रियजगतमा पुर्‌याउन सक्नुपर्छ। होटलहरूका समस्या पनि अलग–अलग छन्। नयाँ पाँचतारे होटलले अर्बौं लगानी गरेका छन्। लगानी गरेको धेरै समय पनि भएको छैन। बैंकको ऋण अर्बौंमा छ। किस्ता र ब्याज तिर्नैप¥यो। पुराना होटललाई स्टाफको समस्या छ। ३० वर्षसम्म काम गरेको एउटा सामान्य कर्मचारीको तलब–सुविधा र नयाँ आएको सिनियर कर्मचारीको तलब झन्डै बराबर हुन्छ। जति स्मार्ट रहन गयो त्यति नै महँगो हुँदै जान्छ। अर्को, ९० प्रतिशत होटल भाडामा छन्। यो तीनवटै तहका होटललाई हेरेर सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
भर्खरै खुलेका होटलहरूको अवस्था कस्तो छ?
नयाँ होटलहरू गम्भीर संकटमा छन्। बैंक पनि व्यवसाय गर्न बसेका हुन्। उदारता देखाउनेवाला छैनन्। अब सरकारले नै बैंकलाई पैसा दिएर होटल क्षेत्रलाई यसरी रेस्क्यु गर, ब्याज यति घटाउ, घटाएको ब्याज हामी दिन्छौं भन्नुपर्छ। माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा ८ देखि १० वर्ष यस्तै थियो। त्यतिबेला साढे ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निश्चित रकम थियो। त्यसरी सरकारले प्याकेज ल्यायो भने मल्टिमेगा प्रोजेक्ट भएका होटलहरू सर्भाइभ हुन्छन्। नभए बन्द हुन्छन्। खुल्दै नखुलेको होटलको त कुरै छैन। निर्माणको चरणमा रहेका होटलहरूले निर्माण बन्द गर्छन्। पर्यटन अर्को दुई वर्षसम्म आउँदैनन् भने होटल खोलेर के हुन्छ र!
इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा) ले २०२३ सम्म एयर ट्राभल नियमित अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्था छैन भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। वास्तविकता यही हो भने पर्यटन क्षेत्रले कसरी धान्न सक्छ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्र नै हो। उड्डयन क्षेत्र तहसनहस भएको छ। ठुल्ठूला एयरलाइन्सले ८ हजार हवाईजहाज ग्राउन्डेड गरेका छन्। ९० हजार पाइलटको रोजगारी धरापमा परेको छ। यहाँको फ्लाइटको मुभमेन्ट कस्तो होला! प्रोटोकल कसरी म्यानेज गर्ला! २ सय ५० जना बोकेको जहाजले १ सय २५ बोक्यो भने त मान्छे आत्तिहाल्छन् नि। सबै क्षेत्रको अप्रेसन मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट आदिको पनि अप्रेसन मोडेल परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण पहिले भइरहेको रेभेन्यु (आम्दानी) अब तत्कालै जेनेरेट हुँदैन। यही कारणले साना होटल घरभाडा तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन्। ठूला होटल बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन्।
तपाईं नाङ्लो ब्रान्डमा चेन रेस्टुरेन्ट चलाइरहनुभएको छ। लकडाउनका कारण सिर्जित परिस्थितिले कस्तो अवस्था छ?
अहिले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा समस्या आएको छ। त्यसैले गएको वर्ष तीनवटा बन्द गरे। टेकु, चाबहिल र ग्वार्कोमा बन्द गरेँ। कोभिड–१९ पछि अरू दुईवटा बन्द गर्दैछु भनेर नोटिस दिइसकेँ। एउटा पुरानो भाटभटेनीमा र एउटा महाराजगन्ज भाटभटेनीमा बन्द नै भइसके। व्यापार नभएपछि चलाउन सकिँदैन नि। यो बिजनेसलाई निरन्तर अघि बढाउन मोडल परिवर्तन गर्नुपर्‌यो। अर्को, केही शाखा बन्द गर्नुपर्‌यो। कोरोना प्रकोपले सबैसँगै बसेर रमाइलो गर्ने माहोल छैन। त्यसैले धेरै कर्मचारी पनि नराख्ने र नयाँ तरिकाले जाने तयारीमा छु। दुई महिनादेखि घरमा बसिरहेको छु। दिनरात सोच्ने नै त्यही हो। फुड इन्डस्ट्रीमा कसरी जाँदा उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले नै सोच्दैछु।
अहिलेको अवस्था दृष्टिगत गरी बिदा गरिएको कर्मचारीलाई परिस्थिति सुध्रिएको खण्डमा फिर्ता बोलाउनुहुन्छ कि नयाँ नियुक्त गर्नुहुन्छ?
प्राथमिकता पुरानालाई नै हुन्छ। तर, राम्रो ठाउँमा काम सुरु गरेको रहेछ भने नयाँ नियुक्त गर्नुपर्छ। मेरो रेस्टुरेन्ट एउटा ट्रेनिङ सेन्टरजस्तै हो। मेरोमा भएका स्टाफहरू तीन वर्ष वा पाँच वर्ष विदेश गएर काम गर्छन्। अनि फेरि मकहाँ आउँछन्। सिंगापुर, जापानदेखि विभिन्न देशमा काम गरे पनि फर्किएपछि यही आउँछन्। त्यो सम्बन्ध हामी राख्छौं किनभने यहाँ हाम्रोमा ट्रेन्ड भइसकेको हुन्छ, बाहिर गएर काम गरेपछि केही नयाँ सिकेको हुन्छ। हामीलाई पनि फाइदा छ, उनीहरूलाई पनि पुरानो कम्पनीमा सहज हुन्छ। कयौं त्यस्ता स्टाफ छन्। अहिले छुट्टी दिएर पठाए पनि भोलि पहिलो प्राथमिकतामा उनीहरू नै हुन्छन्।
मजदुरहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
कोही मान्छे कुनै कम्पनीमा काम गर्छ भने उसले आठ घन्टा इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। त्यो मानसिकता सबैले राख्नुपर्छ। नेपालमा अर्को समस्या त्यही छ। विदेशमा मेरै साथीहरूको रेस्टुरेन्टमा मैले सिफारिस गरेकाहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ नेपालमा भन्दा धेरै काम गर्छन्, मान्छे त्यही हो। यहाँ आएपछि किन उनीहरूको सोचाइ परिवर्तन हुन्छ म बुझ्दिनँ। बाहिर जुन मिहिनेतका साथ काम गर्नुहुन्छ। नेपालमा पनि त्यही पौरख देखाउनुस्, भविष्य यहाँ राम्रो छ। नेपालमा मलेसियाको भन्दा धेरै तलब दिइरहेका छौं। तर, मलेसियामा जुन किसिमले खट्छन्, यहाँ खट्दैनन्। मेरो सन्देश त्यही हो, काममा गएपछि मनैदेखि काम गर्नुपर्छ, त्यसले आफ्नो क्षमता पनि विकास हुन्छ। मिहिनेतपूर्वक काम गरेपछि आफूले चाहेजस्तो पारिश्रमिक पनि पाउन सकिन्छ।
नारायणी कोभिड अस्पतालका ३४ जनाले जिते कोरोना
वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण जित्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। वीरगन्जको गण्डकस्थित नारायणी अस्थायी कोभिड वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचाररत ३४ कोरोना संक्रमित निको भएर आज घर फर्किएका छन्। आरोहण शाह